Qalabka A320 Mega - albaabada A321 ma furan yihiin?
Qalabka A320 Mega - albaabada A321 ma furan yihiin? 2 sano 1 bil ka hor #1092
Diyaarad kastoo kale waa ku fiican tahay xirmada marka laga reebo A321, waxaan furi karaa oo kaliya albaabka weyn, ma waxaa jira qalad tan?
Qalabka A320 Mega - albaabada A321 ma furan yihiin? 2 sano 1 bil ka hor #1094
Waa salaaman tahay, Nuqul ka samee [EXITS] qaybta caadiga ah ee A321 kuna badal qaybtaas A321 ee xirmada Mega! Hadaad ubaahantahay talaabo talaabo iisoo ogeysii. Si aad u fududaato, waa kan qaybtaas hoose oo la daabacay .. hagaajin koobi oo dhaji
bixid.0 = 0.4, 45.50, -6.0, 7.0, 0 // qaddarka qaddarka furan ee daqiiqaddiiba, dherarka dheer, dambe, jagooyinka taagan ee ka soo baxa datum (cagaha), nooca (0 = Ugu hore 1 = Xamuul 2 = Xaaladda degdegga ah)
1 = 0.4, 33.50, 5.85, 0.0, 1, 0 // Tirada dhicis maskaxeedka boqolkiiba halkii ilbiriqsi, dherer, dabacsan, jumladaha laga soo bilaabo badmaalka (cagaha), nooca (1 = Main 2 = Xaaladda XNUMX = Xaalad degdeg ah)
bixitaan.2 = 0.4, 29.90, 6.0, 1.0, 2 // qaddarka furan ee boqolkiiba hal daqiiqad, dhejis, gadaal ah, boosas taagan oo ka soo baxa datum (cagaha), nooca (0 = Ugu hore 1 = xamuulka 2 = Xaaladda degdegga ah)